Ixabiso le-Samsung Galaxy S10 5G ngoku lisemthethweni | I-Androidsis
Sele silazi ixabiso leGPS S10 5G
I-Samsung Galaxy S10 5G ngoku iyathengiswa eMzantsi Korea. Le nguqulo yesiphelo esiphezulu sophawu Iphehlelelwe izolo ngolwesiHlanu kwintengiso yelizwe. Iya kuba yintengiso yokuqala apho isungulwa khona. Nangona kulindeleke ukuba kuyo yonke le nyanga izokufika naseMelika. Zizo kanye ezi ntengiso zimbini sele ziqalile ukuba ne-5G kule veki.
Enye yeedatha apho abasebenzisi abaninzi bafuna ukwazi amaxabiso ale nguqulo yefowuni. Ukusukela ngelo xesha akukho nto yathethwayo malunga nokuba i-S10 5G ibiza malini. Ngethamsanqa ngoku sele ikhutshiwe eMzantsi Korea, sinexabiso kwiinguqulelo zalo ezahlukeneyo. Iya kusinceda sazi ukuba kungabiza malini na ukumilisela iYurophu.
Ngale ndlela, i-Galaxy S10 5G isungulwe kwinguqulelo ene-256 GB yokugcina, Ixabiso lokutshintshiselana ngamawaka eerandi. Ukongeza, sikwanohlobo lwesibini lwesiphelo esiphakamileyo. Kule meko ngokugcina i-512 GB. Le nguqulo ibiza kakhulu, ngexabiso elingu-1.215 lama-euro ukutshintsha. Ixabiso elithile libiza kakhulu kunoluhlu lonke, ke ngoko.
Le datha yinto enomdla kubathengi. Kuba phakathi kwentwasahlobo nehlobo olu hlobo lwefowuni ye-Samsung kufuneka lusungulwe eYurophu. Nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho nto ikhankanyiweyo malunga nemihla kunye namaxabiso. Kodwa ubuncinci sele siyazi ngawaphi amaxabiso esinokuwalindela kumnxaba.
Le Galaxy S10 5G iba yimodeli yokuqala yokuba nenkxaso ye-5G ezakwaziswa eMzantsi Korea. Nangona kwiiveki ezimbalwa ezizayo uya kuba nenkampani. Kuba i-LG V50 ikwahlasela kwimarike, U-Epreli 19 uya kuthi ngqo. Ke abasebenzisi kweli lizwe baya kuba nakho ukukhetha phakathi kwezi modeli zimbini ziphakamileyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, linyathelo elibalulekileyo. Kuba kulindeleke ukuba Ukuthunyelwa kwe5G kuya kwenza inkqubela phambili kwezi nyanga. Nangona eYurophu kuya kufuneka silinde de kube ngunyaka olandelayo ukuze sikwazi ukuyisebenzisa. Ke i-Galaxy S10 5G ayenzi ngqondo eYurophu okwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Sele silazi ixabiso leGPS S10 5G
Iinkcukacha ezintsha ezivuzayo malunga neGalaxy A90